မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: သူမက ကျမအတွက်တော့ ဓူဝံကြယ်...
ကြယ်တစ်ပွင့်တိုးလာလို့ ကောင်းကင်ကြီးကျဉ်းကျပ်သွားတာမှ မဟုတ်တာလို့ တစ်ယောက်ကပြောတယ်...ငါသိနေတယ်.. အဲဒီကြယ်က ဓူဝံကြယ်ဖြစ်မှာ မြေခွေးတွေက ကြောက်သတဲ့...ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားခံဟုရေးခြင်းသည် အသရေဖျက်ခြင်းဟု ဘီအယ်လ်စီ ပြောတယ်။ ပုပ်သိုးနေတဲ့ ပုဒ်မရော အမှန်အကန်ပုဒ်ထီးရောတော့ ငါ နားမလည်ဘူး။ဒါပေသိ ငါ့အထင်က ..မှန်၏....တရားခံဆိုတာထက် မတရားစွဲဆိုထားခြင်းခံရသူ.. အတိုချုပ်ရေးချင်ရင်လဲ မတရားခံလို့ ရေးသင့်၏..What so ever, I wish Aunty Su got better days at soonest. I cannot wait it till tomorrow... I have nothing to do but praying..
ဟုတ်ပါတယ် မတရားခံပါပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးသိတယ် ဟိုလူတွေလား? အင်း မြေခွေးလား..? ခွေးသူတောင်းစားလား? ကျနော်လည်းသိပ်မသဲကွဲဘူးခင်ဗျ တခါတခါကျနော့်စိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုဓါးပြတွေနဲ့တောင်မှားချင်နေသေး ....ခေတ်ကြီးကလည်းမှောင်လိုက်ပါဘိ...:(